Ngingakwazi ukunikeza aspirin kuya ingane? Lo magazini balithanda abazali abaningi muva nje. Phela, ngaphambi izidakamizwa muntu ungaqiniseki. Kwathatha zonke okhethweni, uma-ke kwakudingekile ukuba alethe lokushisa phansi. Kodwa imithi akemi namanje. Ososayensi baqala ukufeza ezihlukahlukene izifundo ukuthi baye bangabaza kuzuze izindlela kwethu kwamanje. Ngakho ongasinikela aspirin ezinganeni? Kulo mbuzo uma silinga ukuphendula ku. Eqinisweni, uma into enhle, bese akunankinga noma singabaze nawe uma kungavela.
Ukubonakaliswa ezivame kakhulu lesi sifo cishe kunoma iyiphi ukwanda lokushisa komzimba. Esikhathini esithile, kungase uphakeme kakhulu. Ukuletha izinga lokushisa phansi, phambi kwabo bonke poll ukunikeza aspirin. Ingane noma umuntu omdala - Akunandaba. Vele Isikali ezahlukene zomuthi. Futhi ngokushesha kakhulu izinga lokushisa emzimbeni ubuyela evamile. Ngakho, isimo lesiguli ngcono.
Ama-aspirin - kuyindlela jikelele ukwehlisa izinga lokushisa. Ngesimo okumsulwa ke ingatholakala kunoma iyiphi ekhemisi. Akukhona eqolo, ezingabizi zonke izakhamuzi. Kodwa bambalwa kithi ukwazi izinzuzo izidakamizwa.
Ukungabaza emva izifundo
"Ingabe izingane aspirin?" - Lo mbuzo waqala bajabule abazali muva. Njengoba kakade kushiwo, wangabaza ovamile futhi owaziwa abacwaningi izidakamizwa ezifana ukubikezela. Baqala ukuba afeze ezihlukahlukene izifundo ukuthi bakhomba izinzuzo ezingabazisayo impilo izidakamizwa.
Ngempela, i-aspirin ngokushesha sidilize ukushisa. Kodwa sebelahlekelwe yini? Ososayensi emva izifundo baphetha ngokuthi i-aspirin iyisithako into enobuthi. Futhi ngaso sonke isikhathi kufanele kuthathwe ngokucophelela okukhulu. Futhi abantu abadala kanye nabantu asebekhulile. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi ukunikeza aspirin kuya ingane?
Impendulo yalo mbuzo njalo umzali kufanele uzinike. Phela, abameleli zomthetho kuphela banesibopho ukuphila nempilo umntanakho lokuya ebudaleni.
Ama-aspirin ukuze izingane ngesikhathi ngaphambili inikezwe. Ngaphezu kwakho konke, uma umzimba sishisiswe degree angaba ngu-38.5. Uma umzimba ufakwa wenza ukwanda lokushisa, ngakho-ke ayikwazi ukubhekana nalesi sifo.
Kuye kuthiwe ukuthi ososayensi baye bangabaza izidakamizwa kubhekwe. Kodwa kanjani ncamashi? Engikuthanda Isimanga-ke lesi yi ezivamile aspirin yezokwelapha zesimanje? Ucwaningo lubonise ukuthi ngisho nabantwana ababenikwe izidakamizwa, nivame Reye Syndrome - a ukulimala kobuchopho anobuthi. Futhi, isimo jikelele we ingane ilimala eziwohlokayo. Yebo, strays lokushisa, kodwa endaweni yayo kungavela komzimba okufana ikhanda nezinhlungu esiswini, ukuhlanza kanye nesiyezi. Ngokuvamile, akekho usephephile ukudakwa. Futhi ngakho konke baba kuphakama bayanda embuzweni wokuthi ingakanani kuyadingeka aspirin ezinganeni. Ingabe-ke ukunikeza noma kangcono phindo nga lo izidakamizwa?
Kuye kwathiwa - impendulo yalo mbuzo ungayithola kuphela ukunikeza wonke umzali nengane ethile. Yena enquma indlela yokwenza impatho. ungakwazi ukunikeza aspirin ingane engahlosile. Wakwenza njani lokho?
Into wukuthi aspirin - iyona Isakhi esiyinhloko antipyretics kakhulu. Ungase ukuthole kokubili izingane kanye nabantu abadala imithi. Akumangalisi, ngoba aspirin kahle benenkinga noma iyiphi lokushisa! Ngakho uma unquma hhayi ukunikeza ingane ngokunembile le ngxenye, silitadisha ngokucophelela indlela yokwakheka yimuphi izidakamizwa. Mhlawumbe kuyotholakala aspirin!
Ungethuki kungazelelwe uma wanika namuhla zethu kusho ingane yakho. Konke kuncike engu emincane. Ingani ku-esithile ezithile, umuthi engalethi ukulimala okukhulu. Ake sithole ukuthi kwakungani lapho kuba yingozi ngoba ingane.
Ingabe ingane eyodwa (unyaka owodwa) ku-aspirin? Odokotela musa batusa leli thuluzi ukunikeza usana. Nokho, kuze kube yizinyanga eziyi-12, izingane bayatfutfuka kakhulu ngenkuthalo, njengoba amasosha abo omzimba azikakabi ngokwanele athuthukile. Futhi noma yimuphi umuthi kungaba yini ukusabela okuhle. Kunoma ikuphi, aspirin - ithuluzi sína. Newborn, benganikezwa is ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Ngaphandle sokugcina, kuphela uma uyosindisa ingane ekufeni.
Odokotela batusa Ama-aspirin akwazi isikhundla izindlela onomoya omnene ka ukwehlisa izinga lokushisa. Iningi labo. Vele qiniseka ukuthi ukwakheka kwakungekho Ukhulumé aspirin!
Ngingaba ngempela aspirin ingane? Ngemva onyakeni wokuqala wokuphila, usana iqala, njengoba umkhuba imibukiso, begula kaningi. Ngokuvamile izifo ephelezelwa imfiva. kanjani abazali? Ingabe kuwufanele it sithathe ezinye izindlela ezikhethekile ukwehlisa izinga lokushisa noma ungavele ukunikeza ingane i-aspirin?
Ngemva kokushikashikeka unyaka wonke aspirin libuye Kunconywa ukuthola. Uma ngezinye izikhathi wena unike lolu izidakamizwa ukuze ingane, into embi kuzokwenzekani. Phela, ama-aspirin, ohlengwe ukushisa kuzo zonke isikhathi eside. Futhi kwakungekho muntu owakhuluma ngezingozi lokhu izidakamizwa. Yebo, ngokuvamile ukunikeza Ama-aspirin akwazi ukuthi ingane ayiyona zinkulu. Ngisho nabantu abadala akunconywa reception njalo, ingasaphathwa ukukhuluma mayelana izingane! Kodwa ngesinye ithebhulethi / sachet ekwakhiweni lutho olubi kuzokwenzeka.
Nokho, zama hhayi ukuba bazibandakanye. Phela, ama-aspirin - kungcono izinto ezinamandla. Futhi ungavumi ukuba ingane yakho ngokuvamile. Kungcono ukuba afinyelele "Panadol". Lona isixazululo ofanele kakhulu. Noma kunjalo, abantu abaningi ngakho-ke cabanga odokotela. Ama-aspirin, ake kuphela uma izinga lokushisa noma aphakame kakhulu, noma akusho aphule. Supplies izidakamizwa uma eziphuthumayo.
Ngakho lapho ungakwazi ukunikeza ingane yakho aspirin, ngakho wabona ukuthi kwakungekhona okwakhe ingozi empilweni yakhe? Odokotela musa batusa kokunikeza lo izidakamizwa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-14 ubudala. Ngakho, kuze kube ingane ifinyelele isimo esemusha, acetylsalicylic acid akufanele isetshenziswe njengethuluzi lokubandlulula antipyretic ngaye. Kodwa ngemva kweminyaka engu-14 kungenzeka ukusebenzisa ukulungiselela ngendlela efanayo njengoba abadala.
Ngokuvamile, ama-aspirin abenqatshelwe. Lokhu kusho osekuyisikhathi eside ziphumelela ukwehlisa izinga lokushisa. Uma lona ingane yakho futhi ungazange wakuphawula yini imiphumela emibi, asikho isizathu nomsindo we-alamu. Izingane eziningi zikhulela enempilo, kodwa wathatha aspirin. Yebo, wajabula nosana kuboniswa kuphela ukusindisa izimpilo, futhi abantu abangaphansi kweminyaka engu-14 ezinqunyiwe kuphela uma kunesidingo. Kodwa lokho akusona isizathu sokuba netwetwe, uma esikhundleni "Panadol" ingane inikezwe acetylsalicylic acid. Vele watch out for isimo ezincane futhi akamnikelanga ibuphi ubuchwepheshe third-party ukwehlisa izinga lokushisa.
Ngempumelelo buso ebusweni for isikhumba oily